Sabah Malaysia na-anabata ihe karịrị 1 nde ndị njem na nkeji nke mbụ nke 2019
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Sabah Malaysia na-anabata ihe karịrị 1 nde ndị njem na nkeji nke mbụ nke 2019
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ihe dị ka ndị njem 1,033,871 gara Sabah n'ime ọnwa atọ mbụ nke afọ a, osote onye isi ndị isi Datuk Christina Liew kwuru.
Liew, onye bụkwa onye njem nleta njem nleta, omenaala na gburugburu ebe obibi kwuru na ọnụọgụ ndị njem bịara njem gosipụtara ịrị elu nke 9.1 pasent ma e jiri ya tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga.
“Ebumnuche nke ndị njem na-eme atụmatụ imepụta ijeri RM2.23 ijeri maka Sabah,” ka o kwuru mgbe ọ na-ebupụta ndị Sabah's Association of Tour and Travel Agents (Matta) Fair 2019, ebe a taa.
O kwuru na mbọ nkwalite ya na-aga n'ihu site na ozi ya na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ gụnyere ụgbọelu na-esite na ụfọdụ ebe gaa Sabah ga-eme ka a hụ na ebumnuche nke nde mmadụ anọ na-abịa njem nleta na Sabah n'afọ a.
“Twobọchị abụọ gara aga, ekwuputakwara m ụgbọ elu abụọ ga-aga Kota Kinabalu si n’obodo Daegu na Busan nke Air Busan na-arụ. Gbọ elu ndị a ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị njem njem gaa Sabah n'ezie.
N'otu oge ahụ, Liew kwuru na ozi ya site n'aka ndị Sabah Tourism Board ga-aga n'ihu na-akwalite njem nleta na ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Sabah, iji hụ na nkesa nke ndị njem na-agakọ na steeti niile na inye ohere azụmahịa na obodo ndị dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ.
“Ya mere, anyị ga-ewebata 'Cuti-Cuti Tawau' iji gosipụta nhọrọ njem nlegharị anya n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Sabah iji hụ na enwere ike ịchọta ihe nde mmadụ anọ na-eme njem nleta na ndị mba ọzọ.
O kwuru, sị, "Ebe ọwụwa anyanwụ Sabah, ọkachasị obodo Tawau, Semporna, Lahad Datu na Sandakan nwere ọtụtụ ihe nkiri ndị njem na-adọrọ adọrọ na mgbakwunye na ihe akụkọ ihe mere eme."
Ka ọ dị ugbu a, na-ekwu okwu banyere ngosi ahụ, ọ kelere Matta maka ịdọta ndị ngosi 115 iji wepụta ụlọ ntu iji kwalite ngwaahịa ndị njem dị iche iche.